I Ph 6S အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
I Ph 6S
I Phone .6S 64gb. Rose Gold color. အလုံးအရမ်းသန့်တယ်။ 99.9% New. Original Body .Original Glass. စက်ဖွင့်ပြုပြင်ထားခြင်းလုံးဝမရှိကြောင်းအာမခံပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်လက်ကိုင်ပါ။ Down ထားတဲ့ Game တွေ 15 ခုတောင်ပါတယ်ရှယ်တယ်နော် ။Battery လုံးဝရှယ်မရှယ်နော။ Camera ရုပ်ထွက်ရှယ်။ Finger Print ထိပွင့်။ Phone and Original Charger Only. Error အာမခံ။ အလဲအရောင်း။ ပေးတဲ့ဈေးနဲ့တန်အောင်ကိုင်ရမယ်။
Ph No .09448286430
အမည်: I Ph 6S